December 21, 2019 December 21, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on नेपाली फील्मका चर्चीत ६ नायक, कहाँ छन्? के गर्दैछन् ?
चलचित्र दुई प्रकारले चल्छ । एउटा कथा र अर्को स्टार कलाकार । चलचित्र चल्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार भने कथा नै हो । केही कलाकारको नामले पनि चलचित्रको सुरुवाती व्यापारमा फाइदा मिल्छ । नेपालमा थोरै कलाकारको नाममा सुरुवाती व्यापार र केही चलचित्रको सफलता कथा ...
December 17, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on घुम्नै पर्ने देशमा नेपाल पहिलो स्थानमा
बाघका पाइला खोज्दै दिनभरी चितवनका जंगलमा चहार्नु अनि बेलुका नारायणी नदी किनारबाट सूर्यास्तको आनन्द लिनु नेपालमा मनै लोभ्याउने अनुभव हो’, चर्चित मिडिया कम्पनी फोब्र्सले लेखेको छ । ‘अझ गैंडा र बाघका आवाज सुनेर दुई दिनपछि तपाईं त्यहाँबाट फर्किंदै हुनुह...
काठमाडौं। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले एक नाइटक्लवमा खुलेर नाचेको भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा चर्चामा छ । पूर्वराजा परिवारसहित ठमेलको एक नाइट क्लवमा पुगेर रमाएका थिए । सोही नाइट क्लवले आफ्नो सामाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक गरेका तस्वीर र भिडियो चर्चामा...
November 17, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on गर्मी सम्झिँदै बोल्ड केकी, शेयर गरिन् १० तस्वीरहरु
काठमाडौं। अभिनेत्री केकी अधिकारीले जाडो सुरु भइसकेको बेला इन्स्टाग्राम तताएकी छिन् । उनले इन्स्टाग्राममा केही बोल्ड तस्पीरहरु शेयर गरेकी छिन् । फोटो शेयर गर्दै उनले क्याप्सनमा ‘गर्मीका पछिल्ला दिनहरु’ भनेर लेखेकी छिन् । उनको क्याप्सन हेर्दै गर्दा अब ...
November 7, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on संसारकै हट नर्स क्यारिना (फोटो फिचर)
गायक सागर आलेको आज जन्मदिन, कति बर्ष लागे ?
November 3, 2019 November 3, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on गायक सागर आलेको आज जन्मदिन, कति बर्ष लागे ?
काठमाडौं । चर्चित गायन रियालिटि शो नेपाल आइडलबाट उदाँएका गायक सागर आलेको आज जन्मदिन परेको छ । अन्तरास्ट्रिय फ्रेन्चाईज शो नेपाल आइडलको टप ४ मा पुगेर बाहिरिएका चितवनका सागर आले, ‘त्यसपछि निरन्तर संगीतमा लागेका छन् ।’गायन सँगसँगै उनले व्यवसायमा समेत हा...
October 27, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज कुकुर तिहार मनाइँदै, साँझ लक्ष्मीपूजा गरिँदै
काठमाडौं । नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको तेस्रो दिन आज घर घरमा सुरक्षा गर्ने कुकुरलाई मीठामीठा खानेकुरा खान दिएर कुकुरको पूजा गरी कुकुर तिहार मनाइँदैछ । कुकुर तिहार यमपञ्चक अर्थात् दीपावली पर्वको दोस्रो दिन पर्ने भए पनि यस वर्ष तिथिको घटबढका कारण ...